Kheyre oo ku wajahan Dhuusamareeb & Amniga oo la adkeeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kheyre oo ku wajahan Dhuusamareeb & Amniga oo la adkeeyey
Ardaan Yare 27 December 2019
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la filayaa in uu dhawaan gaaro Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug.
Shalay Gelinkii dambe waxaa dhuusamareeb tegay qaar kamid ah Ilaaladiisa gaarka ah iyo Shaqaalaha xafiiskiisa ,waxaana aad loo adkeeyey Amniga Guud ee Magaalada Dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo AMISOM.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa la filayaa in kulamo kala duwan uu la qaato Xubnaha Hoggaanka Ahlusunna iyo qeybaha kala duwan ee bulshada,waxaana u jeedka safarkiisa uu yahay in uu la socdo habka xulista Xildhibaannada Galmudug.
Labadii todobad ee la soo dhaafay waxaa jirtay cabasho ay muujinayeen Beelaha qaar ee Galmudug oo sheegay in Xubnaha qaar pp ay ku lahaayeen Baarlamaanka Galmudug la siiyey Urur gaar ah ayan kamid yihiin 20 Xildhibaan ee la siiyey Ahlusunna Wal-Jamaaca.
30-Bishaan oo ay ka harsan tahay muddo Saddex Cisho ah ayaa qorshuhu yahay in lagu dhawaaqo liiska Xildhibaannada Cusub ee Baarlamaanka Galmudug,waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in cabashada jirta aawgeed ay macquul tahay in dib loo dhigo.
Dhageyso:-Siciid Deni oo qaadacay qorsho ay wado madaxtooyada Somalia